Vivaa Qeeyroon naannawa Boolee mana abbaa Qeeyroo eeguuf – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsVivaa Qeeyroon naannawa Boolee mana abbaa Qeeyroo eeguuf
Vivaa Qeeyroon naannawa Boolee mana abbaa Qeeyroo eeguuf akkanatti daasa (#Sharaa) jaarrachuun keessan namatti tola. Gariin keessan osoo biyyaaf biyyee wareegamaan barbaadaa jirruu mana barbaanna jattanii akka nun salphifnegaa
OMN: Haala yeroo irratti Yaya Beshir (Onk 23, 2019)
#Jawaar_Muhammed OBS wojjiin
Akkuma beekamu guyyaa harraa ummanni Oromoo taatee #Juwaar_Mohammad irratti taasifame ba’ee mormaa ture.Asirratti waaniin dhaga’e caalaa,waaniin ijaan arge dhugaan lama keessakoo tuquun nagammachiise.
1-Oromoon tokkummaa isaa dukkana ifa fakkaatuun diigame deebisee argateera.
2- Beekan G Erena fuula fb isaan ba’ee eenyuun caalaatti Juwaariif birmachaa ture.Kun waan hedduu nu hubachiisa.Beekan Juwaar irraa jibba dhuunfaa tokko akka hin qabneefii jaalala Oromummaa akka qabuuf agarsiiseera.Namoonni hedduun waan akka Beekan Juwaar irraa jibbaaf inaaffaa dhuunfaa qabutti waggoota hedduuf yaadaa turan.Yaadaa namootaa kana haqa qabuun fashaleessuun “Ani obboleessikee siif jira” jechuun Beekan qulqullummaasaa nutti agarsiise.Kun haqa argineedha.
Xumura irratti Juwaariif dhaamsan qaba.Namoonni itti dhiyaattan itti naaf dhaamaa.
Ilaa nadhaggeeffadhu Juwaar,Oromoon sibarbaada,Oromoon sijaallata,qubni ofii tokko yoo madoofte muranii hin gatan.Nutis siin moggaatti sigatuu hin dandeenyu.Yoomiyyuu taanan OPDO hin amaniin.Sitti fayyadamanii booda akka agadaatti situfu.Fakkeenyan siif Kenna Juwaar,yeroo darbe #Diinaras Kan jedhamu qabsa’aa buleessa itti fayyadamanii erga quufanii booda saree nyaachiisan.Yeroo itti fayyadamaa turan akka buphaatti kunuunsaa turan.Kana aniyyuu ija koon argeera.Anattis ergamee na ajjeesuuf karoorfatee ture.Isa seenaaf dhiiseen waa siinjedha Jawweekoo! Maaloo Oromoo kallattii arfan irra jiran dhaggeeffadhu,miidiyaa OMN-s Kan dhugaa qofa dubbatu godhi.Tarsiimoo ummanni Kun fedhuun deemi.Ummata Wallaggaaf Gujiif borii eegalii sagalee ta’i.Yoo kana goote ati anaaf #Marroodha!
Beekan G Erena atimmoo baga akka namni siin jedhu utuu hintaanee akka dhugaan si oofaa turetti si argine.Ati Juwaar irraa jibba akka hin qabne Ummanni Oromoo Marti nihubata jedheen yaada.Qeeqi,itti himi,gorsi yoo dide ummata Oromootti kenni.
Obboleessa keessan Lati Chali Likasa irraa.